New Games from Steam, weekly – REDPlayer
ဒီတစ်ပတ်ထွက်ရှိထားတဲ့ ဂိမ်းတွေအများကြီးထဲက လက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးတွေ တစ်ချို့ကို လက်လှမ်းမှီသလောက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခုအချိန်မှာတော့ Steam မှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေကိုပဲ ဦးစားပေးပေါ့။ နောက်ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ platformer တွေရော သီးခြား developer တွေရဲ့ game တွေရောစုံအောင်ကြိုးစားကြည့်တာပေါ့။
November 2nd ရက်နေ့ကထွက်ရှိလာပြီးတော့ beta မှာကတည်းက အများစုရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ COD series တွေက ကမ္ဘာ့အပြင်အထိထွက်ပြီးတဲ့နောက် သွားစရာမရှိတော့တဲ့ အဆုံး အရှေ့ဆုံးပြန်ရောက်လာ တဲ့သဘောပါပဲ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲ ပြန်ရောက်ပြီးတော့ လုံးဝ (team-base) အဖွဲ့အားကိုးရတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း zombie mode လည်းမကျန်ခဲ့ပါဘူး။ single-player campaign ဆော့လက်စဖြစ်တဲ့အတွက် “superb” တစ်ခွန်းကလွဲရင်ဘာမှတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ လမ်းခရီးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက် multiplayer mode ကိုကောင်းကောင်း ဆော့ချိန်မရသေးတာပါ။ အရင် series တွေကသရုပ်ဆောင်တွေအပြင် Transformer ရဲ့ မင်းသားတလက်ဖြစ်တဲ့ Josh Duhamel၊ mission impossible တွေထဲက Ving Rhames တို့လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင် ပံ့ပိုးပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ ကူညီပုံတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပြောင်းလဲနေပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ ငါ့အဖွဲဆိုတဲ့ စိတ်ကို ခေါင်းထဲထည့်ထားဖို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ အရင် series တွေထဲကနဲ့ gameplay ပုံစံကွာပါတယ်။ ဒီနေ့ Steam မှာတော့ player အများဆုံး အဆင့် ၁၄ မှာရှိနေပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အနိဌာရုံ မြင်ကွင်းတွေကြောင့် 17+ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာ mobile ကနေ port လုပ်လာတဲ့ထဲပါလာလို့၊ ၂ရက်နေ့ကထွက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ mobile မှာရနေတာတော့ ၅နှစ်လောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်။ f2p လို့ပြောပေမယ့် level တစ်ခုရောက်လာရင်တော့ ထုံးစံအတိုင် ပိုက်ဆံသုံးမှပဲ ဆက်သွားလို့ရပါလိမ့်မယ်။ စကားပြောကောင်းပါတယ်။ 2D MMORPG ထဲမှာတော့ မဆိုးပါဘူး။
18+ မဟုတ်တာတော့ ရဲရဲကြီးအာမခံလိုက်တယ်။ ၁နာရီလောက်နဲပဲ ဇာတ်လမ်းကပြီးသွားတယ်။ English က UI ပဲရမယ်။ ဂျပန်လိုအားလုံးဖတ်တတ်ရင်တော့ ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူး၊ ပြီးတော့ နောက်ခံသီချင်းနဲ့ ပုံလေးတွေ မိုက်တယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဂိမ်းကစားရတယ်ဆိုတာထက် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ရတာပါပဲ။
SAO game ဆိုရင် တော့ JMMORPG fan တွေသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Sword Art Online ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအကြိမ်မှာတော့ Sword Art Online : Hollow Realization ထွက်ရှိလာတာပါ။ Character ကိုလိုသလိုပြင်လို့ရတာလေးက ကျား/မ မရွေးတဲ့အတွက် မိုက်တယ်။ hack & slash ဆိုတော့ gameplay ပိုင်းကအထွေအထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ တစ်ခုပဲ ဇာတ်လမ်းကြိုက်ရင်တော့ ကောင်းလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ USD50 ဆိုတာ မနည်းပါဘူး။
ဒီတစ်ခုကို စတွေ့တုန်းက ကလေးတွေကို ကျောင်းမှာသင်ဖို့ပေးထားတဲ့ swift playground သင်ခန်းစာတွေလို့ထင်ခဲ့တာပါ။ တစ်ကယ်လည်းအဲ့ဒီ့သဘောပါပဲ။ tile puzzle game ဆိုတော့ အကွက်တွေရွေ့ရမယ့် ဂိမ်းတစ်ခုပေါ့။ single player အေးဆေးဆော့ချင်သူတွေအတွက် အချိန်အားရင် ဆော့ပျော်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး၊ arrow key ထိုင်နှိပ်နေရုံနဲ့ ခေါင်းလေးပါးပါးသုံးရုံပဲ။ f2p ဖြစ်ပါတယ်။
You must be 18 year or older to enter
ပုံကိုသေချာကြည့်ပါ၊ ဝေးဝေးကကြည့်ပါ၊ ၁၉၉၀ ကျော်တွေတုန်းကစခဲ့တဲ့ player တွေဆိုရင်တော့ ရင်ပြန်ခုန်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဘာမှမပြောတော့ဘူး၊ Halloween အတွက်ဆိုတော့ ဒီလို freegame တစ်ခုထွက်လာတာအဆန်းတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ f2p တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်ပေါ့နော့။ porn 18+ တွေ ပထမဆုံးခိုးကြည့်ရတဲ့ အရသာပြန်ရနိုင်မလား ကတော့ စမ်းကြည့်ဗျာ။
ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲ၊ steam မှာတစ်ပတ်အတွင်း ထွက်တဲ့ ဂိမ်းအရေအတွက်က မနည်းပါဘူး။ တစ်ခြား DLC နဲ့ udpate တွေထည့်မတွက်ရင်တောင် ဒီထက် ၃ဆလောက်ရှိပါတယ်။ ok ဗျာ. see ya next week, GG.
Tags newrelease steam weeklySteam